China 10 ungqimba HDI PCB isakhiwo ifektri abakhiqizi | IPandawill
Le yiprojekthi yokwakheka kwe-HDI ye-HDI engu-10 yomkhiqizo wokuzenzekelayo wezimboni. IPandawill ayilingani nefektri ekwakhiweni, kepha kunalokho, ukunciphisa ubunzima nobungozi obungadingekile, silinganisa ukwakheka okulungile kufekthri elungile. Lokhu kwenza umehluko omkhulu ngoba iPandawill isebenza emandleni nasemandleni ezimboni.
FOB Inani :: US $ 12 / Ucezu
Isendlalelo Izingqimba eziyi-10
Izikhonkwane eziphelele 11,350
Ukujiya kwebhodi I-1.6MM
Izinto I-FR4 i-170
Ubukhulu bethusi I-1 OZ (35um)
Ukuqedelwa Kwaphezulu ENIG
Iminithi nge 0.2mm (8 amamil)
Ububanzi bomugqa / isikhala 4/4 mil
Isikrini sikasilika Mhlophe
Ubuchwepheshe wonke ama-vias agcwele imaski ye-solder
Ithuluzi lokuklama Allegro
Uhlobo lomklamo Ijubane elikhulu, i-HDI
IPandawill ayilingani nefektri ekwakhiweni, kepha kunalokho, ukunciphisa ubunzima nobungozi obungadingekile, silinganisa ukwakheka okulungile kufekthri elungile. Lokhu kwenza umehluko omkhulu ngoba iPandawill isebenza emandleni nasemandleni ezimboni.
Lokhu kwazi kutholakala ngolwazi oluningiliziwe lwamandla ethu efektri kanye nokuqonda kwangempela kobuchwepheshe nokusebenza kwabo njalo ngenyanga. Lolu lwazi lunikezwa abaphathi be-akhawunti yethu kanye nethimba lamakhasimende / lamaqembu okusekela ukuze sikwazi ukuqhathanisa amandla ezobuchwepheshe nezidingo zokwakha kusukela ekuqaleni kwenqubo yokucaphuna. Le yinqubo ezenzakalelayo, enikeza ezinye izindlela maqondana nentengo, kanye nekhono lobuchwepheshe. Ukuba nezinketho ezingcono kakhulu kuyisidingo sokwenza imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu.
Uhlobo lwedizayini ye-PCB: Ijubane Eliphezulu, i-Analog, i-Digital-analog Hybrid, Ubuningi obuphezulu / Amandla weVolthi / Amandla, i-RF, i-Backplane, i-ATE, iBhodi Elithambile, iBhodi le-Flex Hard, i-Aluminium Board, njll.
Amathuluzi wokuqamba: I-Allegro, ama-Pads, i-Mentor Expedition.
Amathuluzi wokuhlela: I-CIS / ORCAD, i-Concept-HDL, i-Montor DxDesigner, i-Design Capture, njll.
● Idizayini ephezulu ye-PCB
● 40G / 100G Uhlelo Lokuklama
● Idizayini ye-Digital Mixed Digital
● Idizayini yokulingisa ye-SI / PI EMC
Ububanzi bokuklama kwezendlalelo izingqimba ezingama-40
Ukubalwa kwe-pin pin kungu-60,000
Ukuxhuma okuphezulu ngama-40,000
Ubuncane bomugqa ububanzi 3 mil
Isikhala esincane somugqa 3 mil
Ubuncane nge-6 mil (3 mil laser drill)
Isikhala esikhulu sephini esingu-0.44mm
Max amandla ukusetshenziswa / PCB 360W
I-HDI Yakha 1 + n + 1; 2 + N + 2, X + N + X, Noma iyiphi ungqimba HDI e-R & D
Olandelayo: 2 ungqimba wesifunda ibhodi yokukhiya nge-elekthronikhi
Isakhiwo se-Hdi Pcb